Hé Lộ 20+ Mẫu Tiểu Cảnh Sen đá đẹp Nhất Hiện Nay | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Hé Lộ 20+ Mẫu Tiểu Cảnh Sen đá đẹp Nhất Hiện Nay | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Hé Lộ 20+ Mẫu Tiểu Cảnh Sen đá đẹp Nhất Hiện Nay | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Iisampulu indawo encinci ye-lotus yamatye Ubuhle bufumana ingqalelo yabantu abaninzi namhlanje. Banobuhle obukhethekileyo kunye nobuhle obuhlala busetyenziselwa ukuhombisa iidesika; idesika idesika yolwamkelo… ukudala indawo ezele bubomi kwaye inika umdla kakhulu. Ngaphandle koko, ezi modeli zincinci zizipho ezinentsingiselo kakhulu kwizalamane, abahlobo, oogxa … ngezihlandlo ezikhethekileyo.
Iisampulu zamatye amancinci amancinci e-lotus
Masifunde ngakumbi malunga neemodeli ezincinci zelitye le-lotus namhlanje kwinqaku elilandelayo.
1 Kancinci malunga nomhlaba omncinci welotus
2 Izibonelelo zelotus encinci zizisa
2.1 I-landscape encinci ye-lotus yamatye isoloko isetyenziselwa ukuhombisa kunye nokuhombisa indawo
2.2 Ubume obuncinci belitye lotus sisityalo se-feng shui esitsala ithamsanqa kunye nethamsanqa
2.3 I-landscape encinci ye-lotus yamatye etafileni izisa impilo enhle kumnini
2.4 I-succulents ezintle ezincinci ekulula ukuphila kunye nokuzinyamekela
3 Iimodeli ezingama-20+ zezona miniatures zamatye ezintle kakhulu namhlanje
4 Unokukhetha njani indawo encinci yelotus efanelekileyo kwindawo yokubonisa?
4.1 Iincinci ze-lotus zamatye ezintle zihombisa indawo yokusebenza
4.2 I-landscape encinci ye-lotus yamatye ukuhlobisa igumbi lokuhlala
4.3 Ubume obuncinci be-lotus yamatye ukuhlobisa igumbi lokulala
4.4 I-landscape encinci ye-lotus yamatye ukuhlobisa indawo yegadi
5 Indlela yokunyamekela i-ministone lotus i-miniature landscape ihlala intle
6 Ivenkile ethengisa iimodeli ezintle kunye nexabiso eliphantsi lelotus yamatye amancinci eHanoi
Kancinci malunga nomhlaba omncinci welotus
Indawo encinci ye-lotus yamatye, eyaziwa ngokuba yi-landscape encinci ye-lotus yamatye; ilitye elincinci lelotus encinci okanye ilitye letafile encinci yelotus. Ngokwahlukileyo kwizityalo ze-succulent eziqhelekileyo, i-lotus yamatye amancinci yindibaniselwano yeentlobo ezininzi ze-lotus zamatye okanye i-succulent kunye nezinye izityalo ezifana ne: imithi ye-feng shui; icactus… kunye nezinto zokuhombisa; yenza i desktop potted plant entle enentsingiselo ethile engumfuziselo. Ngamanye amazwi, ilungiselelo le isityalo esinencasa kunye nezinto zokuhombisa ukuze zingene embizeni enye.
Ubume obuncinci belitye le-lotus kunye ne-cactus kwimbiza emhlophe ye-porcelain
Izityalo ezisetyenziswa kwi indawo encinci ye-lotus yamatye zihlala zineempawu ezifanayo. Njengokuthanda ilanga, ukuhlala kwiimeko ezinzima zokusingqongileyo …
Indawo encinci ye-lotus yamatye, indlu eyonwabileyo
>> Ungafumana ulwazi oluninzi malunga isityalo esinencasa ngenqaku: Izipho zeLotus World Ukunika izinto ezithandwa ngabantu abancinci
Izibonelelo zelotus encinci zizisa
I-landscape encinci ye-lotus yamatye isoloko isetyenziselwa ukuhombisa kunye nokuhombisa indawo
Xa kufikwa ku isityalo esinencasa Ndiqinisekile ukuba sonke siyazi ubuncinane iintlobo ezimbalwa. Banembonakalo encinci, entle; jonga ukulungelelaniswa kwamagqabi njengentyatyambo eqhakaze ngokupheleleyo. Kwaye isityalo esincinci se-succulent Zidityaniswe ngobuchule kunye ukwenza umhombiso otsala amehlo ngokugqithisileyo.
Umboniso omncinci welotus yamatye ephupha lomntwana
Kwabo bangabalandeli be isityalo esinegama lelotus yamatye hey, ndisadikwe zezi indawo encinci idalwe kubo. I-landscape encinci ye-lotus yamatye ilungele iindidi ezininzi zeendawo; Iindawo ezibonakala kuzo zinomtsalane kwaye zinomtsalane ngendlela engaqhelekanga.
Indawo encinci yelotus kumyezo wamawaka eentyatyambo
Ubume obuncinci belitye lotus sisityalo se-feng shui esitsala ithamsanqa kunye nethamsanqa
Kwi-feng shui, ayizizo zonke ii-mini-landscapes ezinentsingiselo ekutsaleni inhlanhla; ithamsanqa igama; career… Nangona kunjalo, uninzi lwezityalo ezinencasa ezikhethelwe ukulinganisa kwazo zezo zinamandla anamandla kwaye zizisa amathamsanqa kumninimzi. Ngokukodwa xa kudityaniswe nezityalo ze-feng shui ezifana nomthi wemali; i-honeysuckle; umthi owonwabileyo;… okanye ngecactus; Kwakhona kuzisa intsingiselo engakumbi kwiintyatyambo ezixabisekileyo; ukusombulula ukungaboni ngasonye nabalingane; ehlala ethandwa kwaye encedwa ngumntu wonke; evumayo kuphuhliso lwekhondo lomsebenzi.
I-landscape encinci ye-lotus yamatye kunye ne-pink mon
I-landscape encinci ye-lotus yamatye etafileni izisa impilo enhle kumnini
Ngalo mhlaba umncinci welotus, unenkangeleko etsala amehlo; Ngentsingiselo ye-feng shui elungileyo, bazisa impilo eninzi kumnini. Iintlobo mini ilitye lotus oku, inamandla okufunxa ityhefu eyingozi empilweni; Zisebenza njengesicoci somoya esisebenza ngokugqithisileyo.
Ubume obuncinci belotus yamatye entle exutywe nemali
Akunjalo kuphela, indawo encinci ye-lotus yamatye ukwanamandla okunceda umoya ukuba ukhululeke ngakumbi kwaye ube noxolo; ngaloo ndlela igalelo ekunciphiseni iimpawu zezifo eziqhelekileyo ezifana nentloko; umkhuhlane; ukukhulula intlungu kunye nokubuyisela impilo; Oku kuye kwaqatshelwa zizifundo ezininzi.
Indawo encinci yelitye lelotus exutywe namawaka ethamsanqa
I-succulents ezintle ezincinci ekulula ukuphila kunye nokuzinyamekela
Isityalo seSucculent yeyentsapho yokutsha, ngoko ke iziqu ze-succulent zixhathisa kakhulu kwiindawo ezibuhlungu. Abafuni kunkcenkceshelwa kakhulu kwaye banokukhula besempilweni kwaye bachume unyaka wonke. Ngoko ke, kwabo bathanda izityalo zokuhombisa; kodwa ungabi nalo ixesha lokuwunyamekela umthi; ngoko isityalo se-lotus okanye idesktop encinci yelitye le-lotus yimveliso ehombisa iindawo zokuhlala kunye neendawo zokusebenza ezifanele ukuhoywa kwaye ayinakuhoywa.
I-landscape encinci ye-lotus yamatye eneembiza zerozi
Iimodeli ezingama-20+ zezona miniatures zamatye ezintle kakhulu namhlanje
Unokukhetha njani indawo encinci yelotus efanelekileyo kwindawo yokubonisa?
Iincinci ze-lotus zamatye ezintle zihombisa indawo yokusebenza
Phantse kuzo zonke iiofisi namhlanje, imithi iyimfuneko. Kwaye idesktop encinci yelitye lelotus Ngokusetyenziswa okukhulu, zizityalo eziyimfuneko zokuhombisa kwabo bathanda esi sityalo.
I-landscape encinci ye-lotus yamatye exutywe kunye neephakheji ezintlanu zentsapho
Nini khetha umhombiso weofisi yelitye le-lotus encinci Ziziphi izinto ezifanele ziphetshwe? ilitye lelotus kukho imibala emininzi kakhulu; kufuneka ukhethe i indawo encinci ube nombala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye oluhlaza… baya kunceda ukudala umoya omtsha; nceda indawo ihambelane ngakumbi; ngaloo ndlela kunciphisa ukudinwa nokwandisa imveliso yomsebenzi.
Ubume obuncinci belotus eluhlaza kunye nembiza ye-ang
Ngokukodwa, indawo yeeofisi idla ngokuba nkulu ngobukhulu; kufuneka ukhethe enye imbiza encinci yelitye lelotus encinci kancinci ngakumbi ukuhombisa indawo ukuze ihambelane ngakumbi kwaye iyamangalisa.
Ubume obuncinci belitye lelotus
I-landscape encinci ye-lotus yamatye ukuhlobisa igumbi lokuhlala
Nge ilitye elincinci lelotus landscape Intle kakhulu iya kunceda indawo yegumbi lokuhlala ukuba ingakruquli kwaye ibe yimonotonous. Lo ngumbono omkhulu wokudala indawo efanelekileyo; iiminiatures ezintle zelitye le-lotus esetyenziselwa ukuhlobisa igumbi lokuhlala; Ukususela kwidesksi yokwamkela ukuya kwiishelufu zefestile, kunceda ukudala uvuyo kunye namandla afanelekileyo.
I-landscape encinci ye-lotus yamatye etafileni
Ubume obuncinci be-lotus yamatye ukuhlobisa igumbi lokulala
Kwigumbi lokulala, nciphisa ukubeka iintlobo ezininzi zezityalo zokuhlobisa kwigumbi; nangona kunjalo idesktop encinci yelitye le-lotus inokuthathwa njengento eyahlukileyo. Zingasetyenziselwa ukuhlobisa iikona ezincinci kwigumbi lokulala ngendlela enomdla kakhulu.
Ubume obuncinci belitye lelotus elixutywe nomthi wemali kwimbiza emhlophe yeporcelain
Nangona kunjalo, kufuneka kuqatshelwe; kufuneka ukhethe i imodeli encinci yendawo yelotus encinci yeembiza kwibhalansi ehambelanayo kunye nendawo yokulala. Into elandelayo ekufuneka uyiqaphele kukubeka ilitye elincinci lelotus landscape kwiindawo ezikhanyiswe kakhulu kwigumbi lokulala; ukuze bakwazi ukwenza iphotosynthesis ngokulula kwaye baqinisekise uphuhliso olungcono lwezityalo.
I-landscape encinci ye-lotus yamatye kunye nembiza ye-ceramic
I-landscape encinci ye-lotus yamatye ukuhlobisa indawo yegadi
Ngokuphathelele indawo yegadi, ilitye elincinci lelotus landscape ngokunqabileyo ukhetho lokuhombisa; kuba indawo kule ndawo inkulu kakhulu; Ilotus yamatye inenkangeleko encinci; ngoko andinakubusebenzisa kakuhle ubuhle bam. Nangona kunjalo kunokwenzeka khetha indawo encinci yelotus zihonjiswe kwiindawo ezithile eziphambili egadini ukwenza ii-accents ezinomtsalane.
I-landscape encinci ye-lotus yamatye ukuhombisa igadi
Indlela yokunyamekela i-ministone lotus i-miniature landscape ihlala intle
Ilitye lelotus ngumthi ekulula ukuphila nawo kwaye awufuni kukhathalelwa; Nangona kunjalo, ukuze isityalo sikhule kwaye sikhule kakuhle, kuyimfuneko ukunikela ingqalelo kwizinto ezimbalwa ngolu hlobo lulandelayo:
Into yokuqala yokunikela ingqalelo ilitye lelotus Yi amanzi okunkcenkceshela. Ngokuba ilitye lelotus igcina amanzi kumagqabi kunye neziqu, ngoko iyakwazi ukuhlala kwiimeko zokunqongophala kwamanzi; ngoko ke imfuno yamanzi ayininzi. Nangona kunjalo, xa unkcenkceshela kakhulu, ilitye lelotus Kulula kakhulu ukubola kwisiseko kwaye uqale ukulahlekelwa ngamagqabi onke. Yiyo loo nto, ngaphambili nkcenkceshela izityalo ezinencindi kuyimfuneko ukujonga ukufuma komhlaba, ukulungelelanisa ubungakanani bamanzi ukunkcenkceshela ngokufanelekileyo ukuphepha imeko yokutshatyalaliswa kwamanzi ekhokelela ekufeni kwezityalo; kodwa uqinisekisa amanzi awoneleyo ukuba izityalo zikhule kwaye zikhule.
Ubume obuncinci belotus yamatye kwimbiza yeglasi
Eyona nto ibalulekileyo kwi ilitye lelotus ukuba ukukhanya. Zonke iintlobo isityalo esinencasa Izinto zifuna ukukhanya ukuze zikhule. Ngoko ke, xa ubonisa izityalo, kufuneka zibekwe kwiindawo ezinelanga kakhulu, ukukhanya kwelanga kwasekuseni kunye nokukhanya kwelanga kwangokuhlwa. Ilitye lelotus Okona kukhanya kulungileyo kumalunga nama-65% ukuya kuma-70%.
Ubume obuncinci belotus yamatye kunye nezityalo ezineembiza
Qaphela, ukukhanya kwelanga kubaluleke kakhulu kwi-succulents, kodwa oko akuthethi ukuba ilanga lingcono izityalo ze-succulent kwi-miniatures kananjalo, akufuneki utshise umthi emini emaqanda xa ilanga lithiyile; oku kuyakwenza ilitye lelotus Iyakwazi ukubuna amagqabi kunye nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni.
Ubume obuncinci belitye le-lotus kunye neembiza ze-terracotta
Ivenkile ethengisa iimodeli ezintle kunye nexabiso eliphantsi lelotus yamatye amancinci eHanoi
IHanoi Bonsai Shop yinkampani ekhethekileyo ekuboneleleni ngezityalo ezihonjisiweyo kunye nezihonjisiweyo ngokubanzi, kunye neencinci ezincinci ze-succulent kunye ne-cactus miniatures ngakumbi. Sinezinto ezininzi ezintle zelotus ezityalwe ezimbizeni kwaye zikhathalelwe ngononophelo olukhulu.
Indawo yokuthengisa i-lotus yamatye amancinci amancinci
Ezi indawo encinci ye-lotus yamatye njengoko iincinci zecactus apha zonke zinamandla kunye nomgangatho olungileyo. Ke ungakhathazeki kakhulu xa uthenga izityalo kwinkampani yethu. Ngaphandle koko, udityaniswa nabasebenzi bethu ukuba ukhethe eyona ndawo yanelisayo yelitye lelotus; Kwangaxeshanye, abasebenzi baya kucebisa malunga nendlela yokunyamekela ngokukodwa ukuze isityalo esincinci esine-succulent sihlala sisihle.
Thenga izityalo ezinencindi ezinembonakalo yomhlaba entle
Nceda uqhagamshelane noHanoi Bonsai kule nombolo: 088.66.22.088 okanye undwendwele amagumbi ethu omboniso apha:
Gcina 2: 616 Hoang Hoa Tham, Tay Ho, Hanoi
Ivenkile 3: 583 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi
Ukuthengisa indawo encinci ye-lotus yamatye eHanoi
Ndiyathemba isithuba sanamhlanje Hanoi Bonsai igalelo ekuncedeni ukuba ukhethe imodeli eyiyo yee-lotus zamatye ezincinci ezilungele indawo yakho. Umnqweno omhle!
Dịch vụ trang trí tiểu cảnh tết cho văn phòng trọn gói | Hatgiongtihon.net